Capital Market | Central Bank of Myanmar
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ
၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ မတ်လအထိ
၂၀၁၉ ဧပြီလမှ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလအထိ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ
Reserve Requirement Instruction
Reserve Requirement Schedule
2018 April to 2018 September
Deposit Basis Report Form
Reserve Requirement Penalty Instruction
Licensed Mobile Financial Service Providers
Licensed Payment Card Issuers
Merchant Acquiring Service
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် CBM-NET ငွေပေး‌ချေမှုစနစ်
2018 April to September
List of Foreign Banks Branches
Representative Offices of Foreign Banks
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ
List of Remittance Business Licensees
List of Authorized Dealer Licensees
Bank Notes & Coins
History of Bank Notes
Series of Bank Notes & Coins
The Central Bank of Myanmar Law-1990
The Law Amending the CBM Law-1995
The Law Amending the CBM Law-1997
The Central Bank of Myanmar Law -2013
Financial Institutions Law
Rules Relating to FIML-1991
The Law Amending the FIML-1994
ညွှန်ကြားချက်များ နှင့် အမှာစာများ
Directive for the CDD Measures
Directive for Export & Import
Directive for USD Withdrawl
The Foreign Exchange Management Law
AML/CFT Risk Based Management Guidance Note
Guideline on Risk Management Practices of Banks
Central Securities Depository Guidelines
Offering Memorandum for Treasury Bills
Offering Memorandum for Treasury Bonds
Securities Auction Procedures
Securities Auction Forms
Discount Securities Price Calculator
Treasury Bills Auction Calendar
Treasury Bill Auction Announcement
Treasury Bill Auction Results
Market Discount Rates at the Government Treasury Bill Auction
Treasury Bonds Auction Calendar
Treasury Bond Auction Annoucement
Treasury Bond Auction Results
Market Weighted Average Yields at the Government Treasury Bond Auction
T-Bill and T-Bond Auction Result Summary
Information Booklet for Government Securities Issuing and Trading System
Securities Company များအား အစိုးရငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို Primary Market နှင့် Secondary Market တို့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Operational Procedure ထုတ်ပြန်ခြင်း
Treasury Bond Price Calculator
Domestic Sanction List
UN Sanction List
Encouragement of AML/CFT Guidance
Announcement for Export Companies
International Transactions Reporting System (ITRS) Code/ FET Reporting Code
Signing of Grant Agreement with JICA
COFTAM Press Release
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အတွက် ကာလရှည်အရင်းအနှီးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများရရှိစေရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထိရောက် စွာအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်ရည် ရွယ်၍ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော အရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးကော်မတီကို (၁.၇.၂၀၀၈)ရက်နေ့တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါကော်မတီအား ထိရောက် စွာ အထောက်အကူပြုစေရန် ဆပ်ကော်မတီ(၆)ခုကို (၁၇-၉-၂၀၀၈)ရက်နေ့တွင် ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဆပ်ကော်မတီများမှာ -
(၁) ပြည်တွင်းငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊
(၂) အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊
(၃) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြုစု ရေးဆပ်ကော်မတီ၊
(၅) လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးနှင့် ပြန်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီ၊
(၆) စာရင်းကိုင်နှင့်စာရင်းစစ်စံများဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
အာဆီယံအရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖိုရမ်မှ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် Time Frame အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ အရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် လမ်းပြမြေပုံ သတ်မှတ်ပြဌာန်းပြီး၊ အဆင့် (၃)ဆင့်ခွဲကာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပထမအဆင့်အား ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အထိလည်းကောင်း၊ ဒုတိယအဆင့်အား ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိလည်းကောင်း၊ တတိယအဆင့်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိလည်းကောင်း သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ (၁.၁.၂၀၁၀)ရက်နေ့ တွင် လက်ရှိထုတ်ဝေလျက်ရှိသည့် (၃)နှစ်နှင့်(၅)နှစ် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ် အမျိုးအစားများအပြင် (၂)နှစ် သက်တမ်းရှိသော အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ် အမျိုးအစားကိုပါ တိုးချဲ့ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရ ငွေတိုက်စာချုပ် အမျိုးအစားများနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိထုတ်ဝေလျက်ရှိသော ကျပ်(၁)သောင်း၊ ကျပ်(၁)သိန်း၊ ကျပ်(၁)သန်း တန်များအပြင် ကျပ်(၁၀)သန်းတန် အမျိုးအစားကိုပါ တိုးချဲ့ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
၎င်းပြင် (၁-၁-၂၀၁၀)ရက်နေ့မှစ၍ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်ရောင်းဝယ်သည့်ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် မြန်မာ့ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတို့အား အများပြည်သူ သို့ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များရောင်းချရန် ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။
ဘဏ်အချင်းချင်းနှင့် ဘဏ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအကြား Secondary Market ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှစ၍ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေချေးစာချုပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အာဆီယံ + ၃ ဘဏ္ဍာရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှုလုပ်ငန်းစဉ်အောက်ရှိ အာရှငွေချေးစာချုပ်ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Asian Bond Market Initiative (ABMI) လုပ်ငန်းစဉ်အရ Japan ASEAN Financial Technical Assistance (JAFTA) ၏ ကူညီထောက်ပံ့ မှုဖြင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၏တာဝန်ပေးချက်အရ နည်းပညာပထမအဆင့်ကို ဒိုင်ဝါသုတေသနအဖွဲ့မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ မေလအထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာအကူအညီဒုတိယအဆင့်အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍၊ နည်းပညာအကူအညီများရယူရန် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအချို့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို့အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် နားလည်မှု စာချွန်လွှာများအရ ဂျပန်နိုင်ငံမှ Japan Exchange Group (JPX), Daiwa Institute of Research Co.Ltd;(DIR), Policy Research Institute ( PRI ) တို့မှလည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ Stock Exchange of Thailand (SET) နှင့် Securities and Exchange Commission (SEC) တို့မှလည်းကောင်း၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ Korea Exchange (KRX) မှလည်းကောင်း နည်းပညာအကူအညီများ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေအား (၃၁.၇.၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေပြဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂) အောင်စာရင်း
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 11.11.2021
နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုစည်းမျဉ်းပြင်ဆင်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၆/၂၀၂၁
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 10.11.2021
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 9.11.2021
Examination on AML/CFT activity of the Banks
Central Bank Survey
Depository Corporations Survey, Other Depository Corporations Survey, Money Supply
Financial Soundness Indicators (FSIs)
Sectoral Loans of State-Owned Banks and Private Banks
Criteria for Foreign Exchange Dealer Licenses
Criteria for Non-Bank Money Changer License
Criteria for Remittance Business Licence
Registration Template for Projected Repatriation Schedule of Principal
Quarterly Financial Statistics Bulletin
Issuance of Government Treasury Bonds
Relationship between Myanmar and SEACEN
Foreign Exchange Regulation Act
Issuing Foreign Exchange Dealer Licenses
Monetary and Financial Cooperation with ASEAN and ASEAN+3 Countries
Directive for Interbank Money Market Transactions
Instruction for Bilateral Interbank FX transactions
Instruction for Bilateral Repurchase Agreement (Rep)
Interbank Market Lending / Borrowing Rate (MMK)
Interbank Market Deposit Rate (MMK)
USD/MMK Bilateral Currency Swap Rate
MMK per USD - Date 26th November 2021
Reference Exchange Rate (Market WAR)
MMK Exchange rate for other currencies are available here (forex.cbm.gov.mm)
FX Market Data
NEER & REER
ဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျင် ၇%
အပ်ငွေပေါ် အနည်းဆုံး အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျင် ၅%
အာမခံဖြင့် ချေးငွေပေါ် အများဆုံး အတိုးနှုန်း
အာမခံမဲ့ ချေးငွေပေါ် အများဆုံးအတိုးနှုန်း
Economic Indicators (%)
Year on Year Inflation
Copyright © 2010 Central Bank of Myanmar. All rights reserved. Related Websites | Contact Us | Sitemap